‘धरानको उपकरण विराटनगरमा जोडेको होइन’
1249 पटक पढिएको
धरान । धरानको कृषि उपज बजार स्थलमा स्थापना हुने विषादी मापन प्रयोगशाला दशै अगाडी सञ्चालनमा आउने एक नं. प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले पहाडी क्षेत्रबाट तरकारी आउने मुख्य नाकाको रुपमा रहेको धरानमा विषादी मापन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार धरानको कृषि उपज बजारमा प्रयोगशाला स्थापना हुने बताए । उनले धरानमा स्थापना हुने प्रयोगशलामा रहने उपकरणहरुको ‘स्पेसिफिकेशन’ तयार भइरहेको भन्दै १५ दिन भित्र स्पेसिफिकेशन तयार गरी टेण्डर आह्वान गरिने बताए । उनले टेण्डरबाट उकरण खरिद गरेर दशै अगाडी नै धरानमा प्रयोगशाला स्थापना गरिसक्ने मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर बिष्टले दाबी गरे । उनले प्रयोगशालासँगै ‘कोल्ड रुम’ समेत धरानमा बनाइने उनले बताएका छन् ।
धरानमा बन्न लागेको प्रयोगशलाका लागी खरिद गरिएको उपकरण विराटनगर भन्सारमा जडान गरिएको भनेर भइरहेको प्रचार बारे सचिव विष्टले गलत भएको बताए । धरानकालागि उपकरण खरिद गर्न टेण्डर नै आह्वान नभएको भन्दै विराटनगरमा जडान गरेको भन्नु सरासर गलत भएको उनले बताए । उनले मन्त्रालयले विराटनगरमा ‘बालि संरक्षण प्रयोगशाला’ निर्माण गरेको र सो प्रयोगशालामा कृषि बालि सम्बन्धी विभिन्न प्रयोग मात्रै हुने बताए । बालि प्रयोगशाला र विषादी मापन प्रयोगशाला बेग्ला बेग्लै भएकोले धरानका लागी खरिद गरेको उपकरण विराटनगरमा जोड्नै नमिल्ने उनले बताए । बालि प्रयोगशालामा प्रदेश भरीका बालिको परिक्षण हुने र त्यसबारे अध्ययन गरी किराको प्रकोप, विषादीको अवस्था लगायतको व्यवस्थापन गर्ने काम हुने विष्टले बताए ।
धरानको प्रयोगशालाकालागि खरिद गरेको उपकरण विराटनगरमा जडान गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सुनसरी सचिव सुजेन्द्र तामाङले फेसबुकबाट असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यस्तै गरी विभिन्न व्यक्तित्वले सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध समेत गरेका थिए भने मिडियाहरुमा समेत उक्त समाचार प्रकाशन÷प्रसारण भएको थियो ।
कृषि उपज बजार धरानका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले भने गत असार भित्रै कृषि बजारमा प्रयोगशाला सञ्चालनमा आइसक्नु पर्नेमा अझै कहिले सञ्चालनमा आउने भन्ने टुंगो नलागेको बताए । प्रयोगशाला सञ्चालनको लागी कृषि बजारले भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेको उनले बताए । प्रयोगशला सञ्चालनमा आएपछि धरान लगायत एक नं. प्रदेशका बजारमा पूर्वी पहाडी क्षेत्रबाट आउने तरकारीको विषादी मापन गरेर बजाजरमा स्वस्थ तरकारी जाने उनले बताए ।
धरानको नवनिर्वाचित नगर प्रमुखद्वारा पदभार ग्रहण - करको दर पुनरावलोकन गर्ने उद्घोष
मंसिर 19, 2076
धरान । धरान उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख तिलक राईले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।बुधबार दिउँसो पदभ�
वडाध्यक्ष सुवेदीले पदभार ग्रहण गरे
मंसिर 18, 2076
धरान । उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएका धरान उपमहागरपालिकाका ७ नं. वडाका वडाध्यक्ष जीवनराज सुवेदीले पदभार ग�
आज धरानका नवनिर्वाचित मेयरले कार्यभार सम्हाल्ने - नराम्रा काम रोक्दै राम्रो काम गर्ने प्रतिबद्धता
धरान । उपनिर्वाचन मार्फत् निर्वाचित भएका धरानका मेयर तिलक राईले आज (बुधबार) धरान उप महानगरपालिकाको कार्य�
नेपाली परिवेशले बुझ्ने शब्द नै परदेशी हो
धरानमा अन्तराष्ट्रिय बालिका दिवशको अवशरमा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता
सिएम कन्दङवाको स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन
कृष्णदास (सिद्धबाबा) बलात्कार काण्ड - फेरी ७ दिन म्याद थप, यसरी हुदैछ बलात्कारको अनुसन्धान
'बाकसमा फर्के - चुनावको ऋण तिर्न मलेसिया पुगेका नेता'
आसुरी प्रवृत्ति बढ्यो : 'पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र'
'साइक्लिङमा नेपाललाई थप एक स्वर्ण'
'निमाले उसुमा जितिन् स्वर्ण, नेपालको स्वर्ण संख्या ३० पुग्यो'
'यी दुई बाल बैज्ञानिक जस्ले आविष्कार गरे अमेरिकाबाट नेपालमा बत्ति बाल्नेरनिभाउने मिल्ने अनौठो प्रविधि' (भिडियो सहित)
Copyright © 2019 - Aujarnews.com All rights reserved